Vola aziatika: Yen sy Shekels | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | soso-kevitra
Mbola misy fotoana elabe alohan'ny hampiasantsika eto amin'izao tontolo izao vola tokana, amin'ny endrik'ireo sarimihetsika foronina amin'ny siansa miresaka tontolo iray mitambatra eo ambanin'ny rafitra politika sy ara-bola tokana, tsy misy sakana geopolitika. Hitranga ve izany?
Mandritra izany fotoana izany ary na eo aza ny fiovana sasany na ny tsena iraisana, dia mbola betsaka ny vola. Androany dia tsy maintsy miteny isika ny yen sy ny sekely, ny vola Japon sy Israel.
1 Ny yen japoney
2 Ny sekely
Ny yen japoney
Io ny vola nasionalin'i Japon ary iray amin'ireo vola manandanja indrindra eto an-tany. Ny teny, raha adika ara-bakiteny dia midika faribolana o manodidina ary toa ny vola tany am-boalohany izay nanome aingam-panahy ny famolavolana no naka tahaka ny peso meksikana.
Ny yen dia natolotra nandritra ny Famerenana amin'ny laoniny Meiji, ny vanim-potoana teo amin'ny tantaran'ny Japoney izay manamarika ny fifaranan'ny feodalisma sy ny fiverenana amin'ny fiainana ara-politika an'ny amperora taorian'ny zato taona vitsy nanaloka an'ireo andriana feodaly matanjaka indrindra tany Japon taloha.
Ny Resto Meiji dia midika ihany koa ny fanavaozana ny firenena, izay hita amin'ny sarimihetsika Ny farany Samurai starring Tom Cruise ary mifandray amin'ny famoronana fanjakana maoderina eropeana.
Nandritra ireo taona nisy fiovana lalina ho an'ny fiarahamonina Japoney dia rehefa tonga ny yen hisolo ny Mon, ny vola tamin'ny vanim-potoana teo aloha, ny vanim-potoana Edo.
Napetraka ara-dalàna ho volam-pirenena tamin'ny alàlan'ny hetsika 1871 ary nilaina ny hidiran'ny firenena amin'ny rafitra maoderina izay tamin'izany fotoana izany dia nihodina manodidina ny Lalaom-bolamena.
Inona ny fenitra volamena? Samy manana ny azy ny vola nasionaly navoaka fanohanana volamena ary izany no niseho nandritra ny fotoana ela, na dia ankehitriny aza dia tsy hajaina intsony izany. Ny marina dia nanomboka tamin'izay ny yen dia niditra tao amin'ny lalao ny vola mitete rafitra ary mazava ho azy, ny fiovana rehetra eo amin'ny rafitra ara-bola dia nisy fiantraikany izany hatramin'ny 1871 lavitra hatramin'izao.
tsara ny vola madinika dia 1, 5, 10, 50, 100 ary 500 y ny faktiora 1, 2, 5 ary 10 yen. Ampiasaina be ny vola ary ny Japoney dia maniry mafy ny hanao kaonty.
Firenena misy ny vola, ny vola, ka na eo aza ny carte de crédit ary mandroso hatrany hatrany, ny fivarotana, ny fivarotana lehibe sy ny gastronomic toerana dia aleony foana ny vola mangatsiaka sy mafy. Ataovy ao an-tsaina izany raha mieritreritra ny hitsidika an'i Japon ianao.
Anarana taloha, akadiana na hebreo fa miorina amin'ny Sumeria taloha. Amin'izay fotoana tena lavitra be izay ny lanjan'izany dia nampifandraisina mivantana tamin'ny lanjan'ny varimbazahaKa isaina fa ny sekely iray dia nitovy tamin'ny 180 grama tamin'ny varimbazaha, mihoatra na latsaka. Miresaka momba ny XNUMX taona talohan'i Kristy isika, mba hananana hevitra.
Betsaka ny olona nampiasa ny anarana sy io vola io, fa tsy mifamatotra amin'ny lanjan'ny varimbazaha dia efa nifandray tamin'ny volamena sy volafotsy. Ankehitriny ny firenena izay manohy mampiasa ny sekely dia i Israel. Eto dia manana lanjany lehibe ary dia tandindon'ny firenena.
Israel dia nanana farantsakely maro mandritra ny tantarany fohy amin'ny maha-firenena: Gerah Kurus, Akce, ny kilao palestiniana, ny sekely ary ny sekely talohan'ny ankehitriny. El sekely, sekely iray na sekely no vola israeliana nanomboka tamin'ny 1980 ary nisolo ny lokanga israelita.
Dimy taona taty aoriana dia nosoloin'ny vaovao sekely iray, miaraka amin'ny vola madinika sy faktiora, mazava ho azy ary amin'ny fikasana hamelomana sy hampandroso ny toekarena israeliana. Ny sekely tsirairay dia mizara ho 100 agorot (agora in singular).
Misy naoty 20, 50, 100 ary 200 sekely ary farantsa 10, 5 ary 1 sekely ary 50, 10 ary 5 agorot. Lazaiko aminao fa raha mieritreritra ny hitsidika an'i Israel ianao dia afaka miditra amin'ny firenena miaraka amin'ny vola vahiny ary manao ny fanovana mifanaraka amin'ny banky, trano fifanakalozana, hotely ary paositra manerana ny firenena.
Mazava ho azy fa avy amin'ny tranonkala fizahan-tany an'ny firenena no anolorany hevitra mitazona dolara na euro vitsivitsy satria misy toerana fizahan-tany tena manaiky an'io vola vahiny io.
Ary koa, raha efa nanao dia ianao dia fantatrao fa tsy mila manova ny vola rehetra indray mandeha ianao fa tsikelikely, hanararaotra ny tahan'ny fifanakalozana ary tsy hahavery vola ariary iray akory. Any Israely koa afaka manala vola any amin'ny banky ianao raha manaiky ny carte de crédit anao izy ireo.
Ary mazava ho azy, raha mitahiry sekely vitsivitsy ianao ary ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Ben Gurion dia afaka mifanakalo azy ireo indray ianao. Ekena ny taha ambony indrindra amin'ny $ 500 na ny mitovy aminy amin'ny vola hafa.
Y raha ny volanao no euro dia vintana ianao satria na dia ny sekely vaovao aza dia vola mamela ny fitomboan'ny harinkarena israeliana, tsy eo amin'ny faran'ny euro izany fa manana tombony ianao.
Farany, Raha Espaniôla ianao dia aza mitazona sekely satria any Espana dia tsy afaka manova ny vola ianao Aza avela handao an'i Israely tsy hanova ny zava-drehetra àry ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Vola aziatika: Yen sy Shekels
Tsy azoko ny shit aaaaaaaaaaaaaaaaaa fa tsy mahaliana ………………….
Marina fa tsy misy na inona na inona ambany indrindra ……………}}}}
hahahahahahaha adala inona
?? dia hoy izy:
Valiny amin'ny ??
JHOIS dia hoy izy:
TSY IZAY INDRINDRA
Valio amin'i JHOIS
erley dany dia hoy izy:
Tsy ilaina amiko ny mahita an'ity fampahalalana ity 😛
Mamaly an'i erley dany
Valeria Antuanet Villaverde Beltran dia hoy izy:
Izany dia nanampy ahy tamin'ny sekoliko
Valiny ho an'i Valeria Antuanet Villaverde Beltran